Global Voices teny Malagasy · 23 Novambra 2012
Tantara tamin'ny 23 Novambra 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Novambra 2012
Lany ho filoham-pirenena amerikanina fanindroany i Barack Obama nefa ahoana ny fandraisan’ireo mpampiasa aterineto any amin’ny tontolo arabo izany? Indro misy pitiny kely tamin’ireo bitsika tao amin’ny Twitter taorian’ny fahalaniany indray. Mizarazara ny fihetseham-po, raha faly noho ny politika ivelan’i Etazonia any an-toerana ny ankabeazany, ny hafa kosa dia faly...
Amerika Latina23 Novambra 2012
Manangona Vaovao Mikasika Ny Firenena Ho Aminà Toerana Iray Ireo Rindrambaiko Zambiana Ho an'ny Finday
Mediam-bahoaka23 Novambra 2012
Taorian'ny fanamboarana rindrambaiko ho anà finday Android tamin'ity taona izay manome fahafahana ireo Zambiana handray anjara anatin'ilay fizotran'ny fanoratana ny lalàm-panorenana, nisy rindrambaiko roa hafa ihany koa, ny Zambia News Daily sy ny The Zambian izay manangona ireo vaovao momba ny firenena avy amin'ireo loharano maro ao anaty aterineto, nipoitra...
Diabe Lavitr'ezaka 300 Km Ho Fanoherana Ny Toby Fanadiovana Vovo-tany Ao Malezia
Azia Atsinanana23 Novambra 2012
Tamin'ny 13 Novambra 2012, noesorin'ny Fitsarana Ambony Maleziana ny fampiatoana roa volana ny fahazoan-dalana nomena ilay orinasa mpitrandraka Vovo-tany Tsy Fahita Firy, Lynas Corporation, mba ahafahany hitrandraka ny Vovo-tany Tsy Fahita Firy ao Pahang, Malezia. Taitra tamin'ny fahalotoana manimba ny tontolo iainana [zh] avy amin'ny vovo-tany tsy fahita firy ao Shina ny vondrona...
Azia Afovoany sy Kaokazy23 Novambra 2012
Voatery nofaranana ny lalao baolina kitra tao avaratr'i Tajik, tanànan'i Istaravshan, taorian'ny gidragidra niseho tao amin'ny kianja filalaovana. Tonga tao an-tanàna avaratra ny ekipa Energetic avy ao Dushanbe tamin'ny 8 Novambra mba hanatrika ny lalao nasionaly hifaninanana amin'ny ekipa ao an-toerana, Istaravshan. Ireo vahiny no nahatafiditra baolina voalohany, kanefa nihetsika mafy...
Eoropa Afovoany & Atsinanana23 Novambra 2012